Evanjelin' ny fahazazana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Evanjelin'ny fahazazana)
Ny evanjelin' ny fahazazana na filazantsaran' ny fahazazana dia karazan-dahatsoratra mitantara ny fitorontoronana sy ny fahaterahana ary ny fahazazan'i Jesoa. Ao amin'ny toko roa voalohany ao amin'ny Evanjelin'i Matio sy ny Evanjelin'i Lioka (atao hoe "fitantarana ny fahazazana"), izay voasoratra tsy talohan'ny faran'ny taonjato voalohany dia ahitana ny tantara toy izany. Hita koa izany ao amin'ny boky voasoratra taty aoriana izay isan'ireo atao hoe boky apokrifa, ka isan'izany ny Protevanjelin'i Jakoba (izay nalain'ny Evanjelin'i Pseodo-Matio tahaka), ny Fiakaran'i Isaia, ny Evanjelin'ny fahazazana araka an'i Tomà ary ny Apokalipsan'i Adama, na koa ny Evanjely arabon'ny fahazazana sy Evanjely armenianan'ny fahazazana, ny Antsan'i Salomona, ny Asan'i Petera ary ny Epistilin'ny Apostoly.
Ny ampahany be amin'ny tantaran'ny fahazazan'i Jesoa araka an'i Matio dia midrash nalaina tahaka avy amin'ny tantaran'i Mosesy (na Môizy). Toraka izany koa ny tantaran'i Joany mpanao batisa ao amin'ny Evanjelin'i Lioka izay midrash naorina avy amin' ny fitantarana ao amin' ny Baiboly momba ny fahaterahan' i Isaka ary indrindra ny fahaterahan' i Samoela, ilay "mpialoha lalana" an' i Davida, modelin' ny mpanjaka mesianika. Ankoatra izany dia azo heverina ho fanitarana ny tantaran' ny fahazazana ao amin' ny Evanjalin'i Matio sy ny Evanjelin'i Lioka araka ny fomban' ny midrash ny Prôtevanjelin'i Jakoba, izay nofenoina tamin' ny midrash momba ny fahazazan' i Samoela mpaminany.
Ny fitantarana ny fahazazana araka an'i Matio sy i LiokaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelin%27_ny_fahazazana&oldid=1041486"
Dernière modification le 13 Desambra 2021, à 13:43
Voaova farany tamin'ny 13 Desambra 2021 amin'ny 13:43 ity pejy ity.